Bhaibheri—Dzidza Shoko raMwari Kuti Uwane Uchenjeri | Swedera Pedyo
1, 2. I“tsamba” ipi iyo Jehovha akatinyorera, uye nokuda kwei?
UNOYEUKA here nguva yawakapedzisira kugamuchira tsamba yakabva kune mumwe munhu waunoda anogara kure? Zvinhu zvishoma zvinotifadza zvikuru setsamba yomwoyo wose inobva kune mumwe munhu anokosha kwatiri. Tinofara nokunzwa pamusoro pokurarama kwake, zviri kuitika kwaari, nezvaari kuronga. Kutaurirana kwakadaro kunoswededza vanodanana pedyo nepedyo, kunyange zvazvo vari kure nekure.
2 Saka zvino chii chingatiunzira mufaro unopfuura kugamuchira shoko rakanyorwa kubva kuna Mwari watinoda? Jehovha neimwe pfungwa akatinyorera “tsamba”—Shoko rake, Bhaibheri. Mariri anotiudza kuti iye ndiani, zvaakaita, zvaachaita, nezvimwe zvakawanda. Jehovha akatipa Shoko rake nokuti anoda kuti tive pedyo naye. Mwari wedu wouchenjeri hwose akasarudza nzira yakanakisisa inobvira yokutaura nesu. Hapana uchenjeri hungafananidzwa nahwo munzira iyo Bhaibheri rakanyorwa nayo nezvarinazvo.
Nei Shoko Rakanyorwa?
3. Jehovha akaunza Mutemo kuna Mosesi munzirai?
3 Vamwe zvingavanetsa kuti, ‘Nei Jehovha asina kushandisa imwe nzira inoshamisa—ngatitii, inzwi rinobva kudenga—kuti ataure nevanhu?’ Chaizvoizvo, Jehovha dzimwe nguva akataura ari kudenga achimiririrwa nengirozi. Somuenzaniso akaita kudaro apo akapa Mutemo kuna Israeri. (VaGaratiya 3:19) Inzwi raibva kudenga raityisa—zvokuti vaIsraeri vakanga vachitya vakakumbira kuti Jehovha asataura navo nenzira iyi asi kuti ataure achishandisa Mosesi. (Eksodho 20:18-20) Mutemo waiva nemirayiro 600, wakaunzwa kunaMosesi uchiita zvokutaurwa, shoko neshoko.
4. Tsanangura kuti nei kupfuudza mashoko nomuromo kwaisazova nzira yakavimbika yokupfuudza nayo mitemo yaMwari.
4 Zvisinei, zvakadini dai Mutemo wakanga usina kumbonyorwa? Mosesi aizokwanisa kunyatsoyeuka bumbiro romutemo rose nomazvo nemashoko aro mazhinji here oripfuudza kurudzi rwose rwaIsraeri pasina chikanganiso? Zvakadini nezvizvarwa zvaizotevera? Zvaizofanira kungovimba neshoko romuromo here? Iyoyo yaisazova nzira yakavimbika yokupfuudza nayo mitemo yaMwari. Fungidzira zvaizoitika kudai waizopfuudza imwe nyaya kumudungwe wevanhu nokuiudza kumunhu wokutanga, iyewo oudza anotevera zvichingodaro kunosvika kune wokupedzisira. Izvo munhu wokupedzisira aizonzwa zvimwe zvaizosiyana chaizvo nezvokutanga. Mashoko oMutemo waMwari haana kuva mungozi yakadaro.
5, 6. Jehovha akarayira Mosesi kuitei nemashoko Ake, uye nei chiri chikomborero kwatiri kuva neShoko raJehovha rakanyorwa?
5 Jehovha nouchenjeri akasarudza kuita kuti mashoko ake anyorwe. Akarayira Mosesi kuti: “Nyora mashoko iwaya, nokuti ndaita sungano newe navaIsraeri.” (Eksodho 34:27) Nokudaro ndiwo matangiro akaita nguva yokunyorwa kweBhaibheri, muna 1513 B.C.E. Kwemakore 1 610 akatevera, Jehovha “akataura . . . panguva dzakawanda uye nenzira dzakawanda” kuvanyori 40 avo vakazonyora Bhaibheri. (VaHebheru 1:1) Nokufamba kwenguva vakopi vakazvipira vakaita nokungwaririra kukuru kuti vabudise makopi akarurama kuti vachengetedze Magwaro.—Ezra 7:6; Pisarema 45:1.
6 Jehovha akatikomborera zvechokwadi nokutaura nesu nemashoko akanyorwa. Wakambogamuchira tsamba yaikosha zvikuru kwauri—pamwe nemhaka yokuti yaikunyaradza panguva yawaida nyaradzo zvikuru—zvokuti wakaichengeta ukaiverenga waiverengazve here? Ndizvo zvazviriwo ne“tsamba” yaJehovha kwatiri. Nemhaka yokuti Jehovha akaita zvokunyora mashoko ake, tinogona kuaverenga nguva dzose uye kufungisisa zvaanotaura. (Pisarema 1:2) Tinogona kuwana “kunyaradza kunobva muMagwaro” patinenge tava kuda kunyaradzwa.—VaRoma 15:4.
Nei Akashandisa Vanhu Kunyora?
7. Uchenjeri hwaJehovha hunoonekwa sei mukushandisa kwake vanhu sevanyori?
7 Nouchenjeri hwake, Jehovha akashandisa vanhu kunyora Shoko rake. Funga izvi: Kudai Jehovha akanga ashandisa ngirozi kunyora Bhaibheri, raizonakidza zvakafanana here? Chokwadi ngirozi dzaizodai dzakarondedzera Jehovha nemaonero adzo akakwirira, dzakaratidza kuzvipira kwadzo kwaari, uye dzakataura nezvevanhu vakatendeka vanoshumira Mwari. Asi taizokwanisa kunzwa sezvisikwa zvomudzimu zvakakwana, izvo zvine zivo, zvakaitika zvazvo, nesimba razvo rinopfuura redu nokure here?—VaHebheru 2:6, 7.
“Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari”
8. Mupfungwai umo vanyori veBhaibheri vakabvumirwa kushandisa mano avo okufunga? (Onawo mashoko omuzasi.)
8 Nokushandisa kwake vanhu kunyora, Jehovha akagovera zvatinoda chaizvo—chinyorwa chaka“furidzirwa naMwari” asi chine zvinhu zvine chokuita nevanhu. (2 Timoti 3:16) Izvi akazviita sei? Muzviitiko zvizhinji, zviri pachena kuti akabvumira vanyori kushandisa mano avo okufunga mukusarudza “mashoko anofadza, uye zvakanyorwa nomwoyo wakarurama, ari mashoko ezvokwadi.” (Muparidzi 12:10, 11) Ndicho chikonzero nei Bhaibheri rine zvidavado zvakasiyana-siyana; zvakanyorwa zvinoratidza mamiriro ezvinhu okwakabva vanyori vakasiyana-siyana nounhu hwavo. * Asi, varume ava “vakataura zvichibva kuna Mwari sezvavaisundwa nomudzimu mutsvene.” (2 Petro 1:21) Nokudaro, chakabuda pakupedzisira chokwadi i“shoko raMwari.”—1 VaTesaronika 2:13.
9, 10. Nei kushandiswa kwevanhu kunyora kuchiwedzera kufadza nokunakidza kweBhaibheri?
9 Kushandiswa kwevanhu sevanyori kunoita kuti Bhaibheri rifadze nokunakidza zvikuru. Vanyori varo vakanga vari vanhu vane kunzwa kwakaita sokwedu. Sezvo vakanga vasina kukwana, vakasangana nemiedzo, nokudzvinyirirwa kwakafanana nokwedu. Mune zvimwe zviitiko, mudzimu waJehovha wakavafuridzira kunyora pamusoro pemanzwiro avo nokutambura kwavo. (2 VaKorinde 12:7-10) Naizvozvo vakanyora mashoko vachiita seavo, mashoko ayo asina ngirozi yaizodai yakataura.
10 Somuenzaniso, ngatitore Mambo Dhavhidhi waIsraeri. Pashure pokunge aita zvivi zvakakomba, Dhavhidhi akanyora pisarema raakadurura mwoyo wake, achiteterera kukanganwirwa naMwari. Akanyora kuti: “Ndinatsei chivi changu. Nokuti ndinoziva kudarika kwangu; chivi changu chinogara chiri pamberi pangu. Tarirai, ndakaberekerwa muzvakaipa; mai vangu vakandigamuchira muzvivi. Regai kundirasha pamberi penyu; musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. Zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika; mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushori.” (Pisarema 51:2, 3, 5, 11, 17) Ungatadza kunzwa kutambura kwomunyori here? Ndiani kunze kwomunhu asina kukwana aigona kutaura manzwiro akadaro?
Nei Bhuku Rinotaura Nezvevanhu?
11. Zviitikoi zvomuupenyu chaizvo zvinobatanidzwa muBhaibheri “kuti tidzidze”?
11 Pane chimwe chinhu chinowedzera kunakidza kweBhaibheri. Zvikurukuru ibhuku pamusoro pevanhu—vanhu chaivo, vanoshumira Mwari nevasingamushumiri. Tinoverenga nezvezvakaitika kwavari, kuomerwa kwavo nomufaro wavo. Tinoona migumisiro yezvavakasarudza muupenyu. Nhoroondo dzakadaro dzakaisirwa “kuti tidzidze.” (VaRoma 15:4) Achishandisa zvakaitika muupenyu chaizvo izvi, Jehovha anodzidzisa nenzira dzinosvika pamwoyo yedu. Funga nezvemimwe mienzaniso.
12. Nhoroondo dzeBhaibheri pamusoro pevanhu vasina kutendeka dzinotibatsira munzirai?
12 Bhaibheri rinotiudza nezvevanhu vasina kutendeka, kunyange vakaipa nezvakavawira. Munhoroondo idzi, zvinhu zvisingadiwi zvinoonekwa zvichiitwa, zvichiita kuti zvive nyore kwatiri kunzwisisa. Somuenzaniso, murayiro upi wokudzivisa kusavimbika waizova nesimba kupfuura muenzaniso mupenyu wounhu hwakadaro hwaiva muna Judhasi sezvaakaita chiito chokutengesa Jesu? (Mateu 26:14-16, 46-50; 27:3-10) Nhoroondo dzakaita seiyi dzinonyatsosvika pamwoyo yedu, dzichitibatsira kuona uye kuramba unhu hunonyangadza.
13. Bhaibheri rinotibatsira sei kunzwisisa unhu hunodiwa?
13 Bhaibheri rinorondedzerawo vashumiri vazhinji vakatendeka vaMwari. Tinoverenga pamusoro pokuzvipira kwavo nokuvimbika. Tinoona mienzaniso mipenyu younhu hwatinofanira kukudza kuti tiswedere pedyo naMwari. Somuenzaniso, ngatitore kutenda. Bhaibheri rinorondedzera chinonzi kutenda uye rinotiudza kuti kunokosha sei kana tichizofadza Mwari. (VaHebheru 11:1, 6) Asi Bhaibheri rinewo mienzaniso yakajeka yokutenda kuchitoratidzwa. Funga nezvokutenda kwakaratidzwa naAbrahamu paakaedza kupa Isaka sechibayiro. (Genesi, chitsauko 22; VaHebheru 11:17-19) Kuburikidza nenhoroondo dzakadaro shoko rokuti “kutenda” rinowedzera kuva nezvarinoreva uye rinova nyore kunzwisisa. Kuchenjera kwakadini kuti Jehovha haangotikurudziri kuva nounhu hunodiwa asi anotipawo mienzaniso yepahunoratidzwa!
14, 15. Bhaibheri rinotiudzei pamusoro pomumwe mukadzi akauya kutemberi, uye tinodzidzei nezvaJehovha panhau iyi?
14 Nhoroondo dzezvakaitika muupenyu chaizvo dziri muBhaibheri dzinowanzotidzidzisa chimwe chinhu pamusoro pokuti Jehovha munhu worudzii. Funga nezvezvatinoverenga pamusoro pomukadzi uyo Jesu akaona mutemberi. Paakanga akagara pedyo nebhokisi rokuisa mari, Jesu akanga akatarira vanhu sezvavakanga vachikanda mipiro yavo. Vapfumi vazhinji vakauya, vachipa “pazvizhinji zvavo.” Asi Jesu akazongoramba akatarira imwe chirikadzi murombo. Chipo chayo chaiva che“mari mbiri duku, dzaikosha zvishoma kwazvo.” * Ndiyo mari yokupedzisira yayakanga yasara nayo. Jesu, uyo akaratidza zvakakwana ndangariro dzaJehovha panhau, akati: “Chirikadzi iyi iri murombo yadonhedzera kupfuura vose vadonhedzera mari mumidziyo yokuisira.” Maererano nemashoko iwayo, yakaisa kupfuura vamwe vose vabatanidzwa.—Mako 12:41-44; Ruka 21:1-4; Johani 8:28.
15 Hazvina zvazvinoreva here kuti pavanhu vose vakauya kutemberi musi iwoyo, chirikadzi iyi ndiyo yakangosarudzwa ndokutaurwa muBhaibheri? Kuburikidza nomuenzaniso uyu, Jehovha anotidzidzisa kuti ndiMwari anoonga. Anofara kugamuchira zvipo zvedu zvomwoyo wose, pasinei nokuti zvakasiyana sei nezvinokwanisa kupiwa nevamwe. Jehovha haaigona kuwana imwe nzira iri nani yokutidzidzisa nayo chokwadi chinokurudzira ichi!
16, 17. Uchenjeri hwaJehovha hunoonekwa sei kunyange mune zvaakasarudza kusiya muShoko rake?
16 Paunonyora tsamba kune mumwe munhu waunoda, panongova nezvakati kuti zvaunganyora. Naizvozvo unotongwarira pakusarudza zvokunyora. Saizvozvowo, Jehovha akasarudza kutaura pamusoro pevamwe vanhu nezviitiko muShoko rake. Asi munhoroondo dzinorondedzera idzi, Bhaibheri haridonongodzi mashoko ose nguva dzose. (Johani 21:25) Somuenzaniso, apo Bhaibheri rinotaura nezvokutonga kwaMwari, mashoko aripo angasapindura mibvunzo yedu iri yose. Uchenjeri hwaJehovha hunotoonekwa kunyange mune zvaakasarudza kusiya muShoko rake. Zvakadaro sei?
17 Nzira iyo Bhaibheri rakanyorwa nayo inobatsira kuyera zviri mumwoyo yedu. VaHebheru 4:12 inoti: “Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rakapinza kupfuura bakatwa ripi neripi rinocheka nekwose uye rinobaya kusvikira panoparadzana mweya nomudzimu . . . uye rinokwanisa kunzwisisa kufunga nevavariro dzemwoyo.” Shoko reBhaibheri rinobaya kusvika pakadzama, richiratidza kufunga kwedu kwechokwadi nevavariro. Avo vanoriverenga nomwoyo wokutsoropodza kazhinji vanogumburwa nenhoroondo dzinenge dzisina mashoko akakwana zvokuvagutsa. Vanhu vakadaro vangatova nomubvunzo kana Jehovha ane rudo, uchenjeri neruramisiro.
18, 19. (a) Nei zvisingafaniri kutinetsa kana imwe nhoroondo yeBhaibheri ichiita kuti tive nemibvunzo yatisingagoni kupindura nokukurumidza? (b) Chii chinodiwa kuitira kunzwisisa Shoko raMwari, uye uhu uchapupu hwouchenjeri hukuru hwaJehovha sei?
18 Kusiyana neizvi, patinodzidza Bhaibheri nokungwarira nomwoyo wose, tinosvika pakuona Jehovha mumaratidzirwo aanoitwa neBhaibheri rose zvaro. Nokudaro, hazvimbotinetsi kana imwe nhau ichiita kuti tive nemibvunzo yatisingagoni kuwanira mhinduro nokukurumidza. Kungopa somuenzaniso: Pakubatanidza zvipenga zvomufananidzo mukuru wakaitwa zvidimbu zvidimbu, zvimwe hatigoni kuona pakutanga kuti chimwe chinopinda papi. Asi tinogona kunge tabatanidza zvimwe zvipenga zvakawanda kuti tizive kuti mufananidzo wakakwana unofanira kuratidzika sei. Saizvozvowo, patinodzidza Bhaibheri, zvishoma nezvishoma tinodzidza kuti Jehovha ndiMwari worudzii, uye mufananidzo chaiwo unobuda. Kunyange kana pakutanga tisinganzwisisi imwe nhau kana kuti kuona kuti inowirirana sei nounhu hwaMwari, kudzidza kwedu Bhaibheri kwakatotidzidzisa zvakawanda nezvaJehovha kutibatsira kuona kuti ndiMwari ane rudo nokururamisira zvisingambokundikani.
19 Saka kuti tinzwisise Shoko raMwari, tinofanira kuriverenga nomwoyo wose nendangariro dzisina kwadzakarerekera. Uhu hahusi uchapupu hwouchenjeri hukuru hwaJehovha here? Vanhu vakangwara vanogona kunyora mabhuku anogona kungonzwisiswa ne“vakachenjera nevakangwara” bedzi. Asi kunyora bhuku rinogona kunzwisiswa neavo bedzi vane vavariro dzomwoyo dzakarurama—izvozvo zvinotoda uchenjeri hwaMwari!—Mateu 11:25.
Bhuku Rine “Uchenjeri Chaihwo”
20. Nei Jehovha bedzi achigona kutiudza nzira yakanakisisa yokurarama nayo, uye chii chiri muBhaibheri chinogona kutibatsira?
20 MuShoko rake, Jehovha anotiudza nzira yakanakisisa yokurarama nayo. Ndiye Musiki wedu, anoziva zvatinoda kupfuura zvatinoita isu. Uye zvinodiwa nevanhu zvinokosha—kusanganisira kuda kudiwa, kufara, uye kuva noukama hunobudirira—hazvina kumbochinja. Bhaibheri rizere nepfuma yo“uchenjeri chaihwo” hunogona kutibatsira kurarama upenyu hune chinangwa. (Zvirevo 2:7) Chikamu chimwe nechimwe chebhuku rino chine chitsauko chinoratidza mashandisiro atingaita zano reBhaibheri rouchenjeri, asi pano ngatimbotora muenzaniso mumwe bedzi.
21-23. Izano rei rokuchenjera rinogona kutibatsira kusachengeta hasha nemafi?
21 Wati wambozviona here kuti vanhu vanochengeta chigumbu nokuchengeta mafi kazhinji vanoguma vazvikuvadza? Mafi musengwa unorema kutakura muupenyu. Patinoachengeta, anotionza nokufunga, anotitorera rugare, uye anofurusa mufaro wedu. Kunzvera kwakaitwa nesayenzi kunoratidza kuti kuchengeta hasha kunogona kuwedzera ngozi yechirwere chomwoyo notumwe tuzukuru twezvimwe zvirwere zvisingaperi. Nguva refu kunzvera kwesayenzi ikoko kusati kwaitwa, Bhaibheri nouchenjeri rakati: “Rega kutsamwa, urashe hasha.” (Pisarema 37:8) Asi izvozvo tingazviita sei?
22 Shoko raMwari rinopa zano iri rokuchenjera: “Kungwara kwomunhu kunodzora kutsamwa kwake; kukudzwa kwake ndiko kukanganwira kudarika kwomumwe.” (Zvirevo 19:11) Kungwara ndiko kukwanisa kuona kupfuura zviri pamusoro, kuona zvinopfuura zviri pachena. Kungwara kunobereka kunzwisisa, nokuti kunogona kutibatsira kuona nei mumwe ataura kana kuita neimwe nzira. Kuedza kunzwisisa vavariro dzake dzechokwadi, manzwiro, uye mamiriro ezvinhu kungatibatsira kurasira kure pfungwa dzakaipa nemanzwiro pamusoro pake.
23 Bhaibheri rine rimwezve zano iri: “Rambai muchishivirirana nokukanganwirana zvikuru.” (VaKorose 3:13) Mashoko okuti “rambai muchishivirirana,” anopa pfungwa yokuitira vamwe mwoyo murefu, kubvuma unhu hungadaro hunotisembura. Kushivirira kwakadaro kunogona kutibatsira kusachengeta mafi notunhu tudiki-diki. “Kukanganwira” kunopa pfungwa yokurega kuchengeta mafi. Mwari wedu akachenjera anoziva kuti tinofanira kukanganwira vamwe kana pane chikonzero chakanaka chokudaro. Izvi hazvisi zvokungovabatsira chete asi nokuda kworugare rwendangariro yedu pachedu nomwoyo. (Ruka 17:3, 4) Shoko raMwari rine uchenjeri zvechokwadi!
24. Chii chinoguma chaitika kana tikawiriranisa upenyu hwedu nouchenjeri hwaMwari?
24 Zvichibva parudo rwake rukuru, Jehovha aida kutaura nesu. Akasarudza nzira yakanakisisa inobvira—“tsamba” yakanyorwa nevanhu vachitungamirirwa nomudzimu mutsvene. Somugumisiro, uchenjeri hwaJehovha pachake hunowanikwa pamapeji aro. Uchenjeri uhwu ‘hwakavimbika.’ (Pisarema 93:5) Sezvatinoita kuti upenyu hwedu huwirirane nahwo uye sezvatinohupa vamwe, tinongonzwa tichiswededzwa pedyo naMwari wedu wouchenjeri hwose. Muchitsauko chinotevera, tichakurukura nezvomumwe muenzaniso mukuru wouchenjeri hwaJehovha hunoona zviri kure: kukwanisa kwake kufanotaura zvomunguva yemberi uye kuzadzika chinangwa chake.
^ ndima 8 Somuenzaniso Dhavhidhi, akanga ari mufudzi, anoshandisa mienzaniso youpenyu hwake somufudzi. (Pisarema 23) Mateu, uyo aimbova muteresi, anotaura zvakawanda nezvemanhamba noukoshi hwemari. (Mateu 17:27; 26:15; 27:3) Ruka, uyo akanga ari chiremba, anoshandisa mashoko anoratidza ruzivo rwake rwezvokurapa.—Ruka 4:38; 14:2; 16:20.
^ ndima 14 Mari idzi dziri mbiri dzainzi lepton, mari yechiJudha duku pane dzose yaishandiswa panguva iyoyo. Malepton maviri akanga akaenzana nechikamu 1 che64 pamuripo wezuva rimwe. Mari mbiri idzi dzaisambokwana kunyange kutenga shiri duku imwe, shiri yakachipa padzose yaidyiwa nevarombo.
Zvirevo 2:1-6 Chii chinoda kuitwa kuitira kuwana uchenjeri hunowanikwa muShoko raMwari?
Zvirevo 2:10-22 Tichabatsirwa munzirai nokurarama mukuwirirana nezano rokuchenjera reBhaibheri?
VaRoma 7:15-25 Ndima idzi dzinoratidza sei uchenjeri hwokushandisa vanhu kunyora Shoko raMwari?
1 VaKorinde 10:6-12 Chii chatinogona kudzidza mumienzaniso yokunyevera inobatanidza vaIsraeri iri muBhaibheri?